New vfxAlert: habab cusub oo lagu kasbado | vfxAlert official blog
New vfxAlert: faa&#39;iido badan oo ganacsatada ah
1. Ikhtiyaarrada tilmaamayaasha TradingView
Dulaaliinta ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxay ganacsatada siiyaan ganacsiyada tiro kooban oo ah qalabyada gorfaynta ee ku yaal meerahooda. Waa inaad isticmaashaa softiweer dheeraad ah, sida barta ganacsiga ee MetaTrader. Nooca cusub ee vfxAlert uma baahna inuu sidan sameeyo; waxay leedahay qalab buuxa oo ka socda barta internetka ee caanka ah ee TradingView
Falanqaynta suuqa iyo go'aan gaarista waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo TradingView, waxaan u adeegsanaa barmaamijka dallaalka kaliya xulashooyinka furitaanka. Jaantusku wuxuu muujinayaa laba tusaale oo ah qalab aan caadi ahayn:
• Ingiriisiga Pound vfxAlert isbeddelka oo leh xaqiijin ka tusaha kanaalka Keltner.
• Bollinger Bands% waxay muujineysaa in labada lamaane ee lacagta EUR / GBP ay ka soo jeesteen qeybta hoose ee Bollinger. Looma baahna in la dejiyo tilmaame "caadi ah" oo lagu buuxiyo shaxanka xarriiqyo aan loo baahnayn.
2. Calaamadaha la qabsiga iyo bedelka Fibo
Qalabka Fibonacci wuxuu ka tirsan yahay calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee sare. TradingView wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si buuxda u hagaajiso saxitaanka ama heerarka kordhinta ee suuqa hadda jira ama waqtiga.
Xaalad markii laba calaamadood oo la qabsi ah ay ka muuqdeen dib u noqoshada suuqa. Si loo go'aamiyo sida saxda ah goorta la furayo ikhtiyaarka jaantuska Fibo Retracement. Waxaan fureynaa ikhtiyaarka labaad kaliya haddii ka dib markaan ka gudubno heerka 1.17 ay jirto calaamad leh dhicitaanka 15 min. Waxaan ka boodnaa calaamadaha marka qiimaha uu ka sarreeyo heerarka 1.618!
3. Isku xirnaanta ganacsiga
Dhammaan lammaanaha lacagta waxay u qaybsan yihiin laba kooxood: oraah toos ah oo tan ugu horreysaa tahay US dollar (USD / CAD, USD / JPY) iyo rogaal-celin (EUR / USD, GBP / USD). Koox gudaheeda, lammaaneyaasha ayaa si iskumid ah u dhaqaaqa, in kasta oo dib u dhac uu ku yimaaddo (isku xirnaansho toos ah), oo ka duwan kuwa kale oo iska soo horjeedda ah (isku xirnaansho aan toos ahayn), taas oo loo arko in lagu kalsoonaan karo.
TradingView wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho jaantusyo badan isla waqtigaas adigoon furin tabyo dheeri ah oo kujira madal ikhtiyaari ikhtiyaari ah Waxaad si dhakhso leh u arki kartaa haddii uu jiro xiriir isla markaana aad go'aansato inaad furto ganacsi ama aad ka joogtid suuqa.
Xaqiijin wanaagsan ayaa noqon doonta joogitaanka calaamadaha ka soo horjeedka vfxAlert, sida ku cad jaantuska: isbeddel ku yeerista euro iyo dib u noqoshada PUT ee doolarka Kanada. Ikhtiyaar ayaa loo furi karaa lammaane kasta.
4. «Tilmaame-cabbiraha xawaaraha cabbirka»
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida tilmaame u shaqeeyo in our blog , halkan waxaan ku tusi doonaa "mitir xawaare" bedeli kartaa oscillators in istaraatijiyad fursadaha binary la soo guurista Celceliska.
Waxaan u adeegsannaa qaybo Sample Moverage Average (SMA) oo leh tiro kala duwan oo xilliyo ah si aan u aragno xaaladda isku mar dhowr jadwal. Qiimaha muddada ee lammaanaha la soo xulay waxaa laga heli karaa internetka ama qaadaa tilmaame diyaar ah, sida "Celceliska Dhaqdhaqaaqa Qaanso-roobeed".
Marka qiimaha uu ka sarreeyo dhammaan SMA, tani waa calaamadda ugu horreysa ee CALL. Heerkulbeegga waa inuu ahaadaa aagga "cagaaran", vfxAlert wuxuu ugu dambeyn xaqiijinayaa ikhtiyaariyada furitaanka. Dib ugu noqoshada calaamadaha binary ee loogu talagalay PUT-option (fiiri sawirka).
5. Heerkulbeegga loogu talagalay cryptocurrencies
Si ka duwan sida suuqa saamiyada iyo Forex, cryptocurrencies ay ficil ahaan uga madax bannaan yihiin dhacdooyinka aasaasiga ah isla markaana ay si wanaagsan ugu ganacsadaan xeelado ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh.
Ku rakib saddex "Speedometers" lammaanaha BTC / USD: ka yar (1 daqiiqo) iyo in ka badan (15 daqiiqo) oo ka mid ah waqtiga shaqada (M5). Calaamaddu waxay noqon doontaa joogitaanka dhammaan tilmaamayaasha hal aag: casaan ahaan loogu talagalay PUT-option, cagaarna loogu talagalay CALL-option. Kani waa analog istiraatiijiyad caan ah oo la yiraahdo "saddexda shaashad ee Odayga", taas oo ku jirta dhammaan koorsooyinka aad ku baran karto ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waxaan ku xaqiijineynaa calaamadda vfxAlert waxaanna doorannaa dhicitaanka.